Dowladafederaalka Somalia ayaa ka laabatay xayiraadii kmg aheyd ee dhowaan ay ku soo rogtay dayuuradihii Qaadka ka keeni jiray wadanka Kenya. – Djiboutination
HomeNews Dowladafederaalka Somalia ayaa ka laabatay xayiraadii kmg aheyd ee dhowaan ay ku soo rogtay dayuuradihii Qaadka ka keeni jiray wadanka Kenya. Dowladafederaalka Somalia ayaa ka laabatay xayiraadii kmg aheyd ee dhowaan ay ku soo rogtay dayuuradihii Qaadka ka keeni jiray wadanka Kenya.
- September 13, 2016 - in News 260 0 script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
Dowladafederaalka Somalia ayaa ka laabatay xayiraadii kmg aheyd ee dhowaan ay ku soo rogtay dayuuradihii Qaadka ka keeni jiray wadanka Kenya.
Sida warar lagu kalsoon yahay ay sheegayaan Madaxweynayaasha Kenya iyo Soomaaliya Uhuru Kenyatta iyo Xasan Shiikh oo maanta kulan gaar ah ku yeeshay goobta uu ka socday shir madaxeedkii IGAD ee magaalada Muqdisho ayaa ugu danbeyn isku raacay in xayiraada laga qaado Qaadkii ka iman jiray Kenya.
Wararka ayaa sheegaya in go’aankan uu dhaqan galayo wixii ka dambeeya maalinta beri ah oo taariikhdu ku beegan tahay 14-ka Septembar.
Dowlada Somalia ayaa labo todobaad ka hor si kmg ah xayiraad ugu soo rogtay dayuuradihii Qaadka ka keeni jiray wadanka Kenya iyadoo ka cabaneysay hadalo ka dhan ah midnimada Somalia oo ka soo yeeray gobolka Meru oo ah halka uu ka baxo Qaadka Kenya.
Previous article Madaxweynaha Jabuuti ayaa goor dhow ka soo degay garoonka diyaaradaha Muqdisho Next article War murtiyeed laga soo saaray Shir madaxeedkii 28-aad ee IGAD oo la soo gebagebeeyey goor dhow About the author djibouti